I-Camp As-You-Like-It - I-Airbnb
Indlu ekhiwe emthini sinombuki zindwendwe onguStacey
Ihlobo lilapha kuzo zonke iindawo eziluhlaza! Ndiyakuthanda ukukhempisha ehlotyeni ngeshawa evulekileyo ngokuhlwa, ukupheka ekhitshini elingaphandle okanye phezu komlilo okanye igrili, ingokuhlwa entle, kusasa. Emva koko ungaphuma ebudeni bobushushu bemini ukuze ubuke iindawo okanye nantoni na oyithandayo.
Ipholile kakhulu xa kuthelekiswa nobushushu bedolophu, nangona iseshushu. Kukho iifeni kunye ne-evlidayator cooler. Zange ndaba nengxaki yokulala kwiloft. Kumnandi nyhani ukumamela izandi zendalo zasebusuku!
Indawo eseluphahleni ipholile kwaye itofotofo. Unezibane kuzo zonke iikona, iindawo zokubeka izinto zakho, ifeni, irediyo, iincwadi, imidlalo, iikhethini zeshawa ezicacileyo ezijikeleze iveranda, nto leyo eyenza kube mnandi kakhulu xa kukho imvula, kunye nesikhululo esineembiza kwiveranda. Ungavula okanye uvale iifestile neengcango, uvule i-heater neefeni uze uzenze uzive uthe zava. Ikhitshi eliphandle linesitovu se-propane, iitafile, izitulo, igrili yamalahle nomngxuma womlilo. Ndahlala apho unyaka onesiqingatha ndaza ndayithanda. Ndandifudumele ngokwaneleyo ebusika kwaye ndipholile ngokwaneleyo ehlotyeni.
Iloft inokuhlala abantu ababini kuphela. Ukuba awufuni ukwabelana ngebhedi enye, kukho umatrasi waphantsi (ogcinwe phantsi kwebhedi). Ukuba liqela labantu abayi-3 okanye abayi-4, kukho indawo yentente efumanekayo kufutshane neloft. Ungabelana ngekhitshi, umngxuma womlilo, kunye negumbi lokuhlambela kunye neendwendwe ze-loft. Ukuba awufuni ukuza nezinto zakho zokuzikhusela, ndineentente, iibhegi zokulala, amashiti nemiqamelo efumanekayo ukuze ndibhatale enye imali eyi- $ 10. Usete.
Ukuba unomdla wokuhlala simahla ukuze unikezele ngomsebenzi, vele undazise. Ndinendlela eninzi yokucoca ekufuneka yenziwe.
imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, Ibhedi encinci eyi- 1
Yindawo esezilalini, kodwa kukho abamelwane. Imizuzu elishumi ukuya ePolkville apho unezikhululo zegesi eziyi-3, ivenkile yelizwe enezinto ezisisiseko eziquka ipitsa, ivenkile enkulu yokuthambisa izixhobo, iofisi yeposi, iDollar General nezinye ezimbalwa.
Yimizuzu eyi-25 ukuya eForest City, eShelby, naseSouth Mountain State Park.
Yiyure eyi- kunye nemizuzu elishumi elinesihlanu ukuya kwidolophu yase-Asheville kunye neyure kunye nemizuzu elishumi elinesihlanu ukuya kwidolophu yase-Charlotte.
Kukho ukutya okungafaniyo kwikhabhathi yakho yasekhitshini kunye nazo zonke iintlobo zokutya osenokuzidinga.
Ungadlala umngxuma okwikona uze uhambe endlini.
Ubukhulu bebhedi bufana nebhedi enkulu. Abantu ababini abathanda ukugwedla baze bangabi nkulu baza kwabelana kakuhle. Kungenjalo, kukho umatrasi wokulala ogcinwe phantsi kwebhedi yomntu wesibini. Isofa ekumgangatho ikwenza uzive uthe zava ukuba awunalo ixhala lokosula.
Ligumbi elinye langaphakathi kunye negumbi elinye langaphandle (iveranda yokuhlala), kunye nokusetyenziswa ngokupheleleyo kwendawo yangaphandle.
Nceda ungabhukishi ukuba awuzinzanga ngeenyawo. Umhlaba kunye nezitepsi azikho kwinqanaba okanye ngokutyibilikayo.
Ukuphakama kwesilingi kumgangatho kuphantsi, njengeminyango! Qaphela ukuba umde.
Ayikho i-WiFi. Kuza kufuneka usebenzise inkcazelo yakho, kodwa siyathemba ukuba uza kuyihoya kakhulu ifowuni yakho.
Kukho iincwadi ezifumanekayo kwiloft. Ukuba uqala enye oyithandayo, ukhululekile ukuyithatha. Ukuba ufuna ukuyeka ibe nye, nceda uyenze loo nto. Kukho nemidlalo kunye nomgangatho wamakhadi.
"Imali Yeenkonzo" kunye "neRhafu Yokuhlala kunye Nemali Emele Ibhatalwe" yi-Airbnb kunye nemali etsalwayo ngurhulumente. Ayonto endinokuyenza ngayo. Ndenze amaxabiso am aphantsi kangangoko kunokwenzeka ukuba aza kundinceda ndize ndiwaxabise.
Nantsi enye into yokugqibela, nceda ujonge ingxelo yemozulu yasePolkville, NC ngeentsuku ozifunayo. Kulungile apha xa kukho imvula encinci, kodwa akumnandanga kakhulu xa kukho imvula eninzi.
Halala! Ndikhangele phambili ukudibana nawe!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ellenboro